Mohamed Salah, Thomas Lemar Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Liverpool. - Laacib.net
Mohamed Salah, Thomas Lemar Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda Ee Liverpool.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa wada qorshe uu kooxdiisa xoojin wayn ugu samaynayo waxayna Liverpool isha ku haysaa xidigo badan oo magaca kooxdeeda lagu xusay wararkii ugu danbeeyay ee ay wargaysyada England iyo Yurub qoreen.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo koobaynaa wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee kooxda Liverpool iyo xidigaha Anfiedl lala xidhiidhinayo.
Ugu horayn Liverpool ayaa kooxda AS Roma kala heshiisay qiimaha lacageed ee Mohamed Salah ugu soo biirayo waxayna Reds qarka u saaran tahay in ay soo gabagabayso saxiixa xidiga ree Masar kaas oo laga sugayo in uu dhawaan Liverpool soo gaadho wuxuuna mari doonaa tijaabada caafimaadka ka hor inta aan heshiiskiis lagu dhawaaqin.
Mohamed Salah ayaa noqon doona saxiixii ugu muhiiimsanaa ee uu Klopp xagaagan sameeyay iyada oo Liverpool ka soo bixinaysa 35 milyan oo gini oo u dhiganta 40 milyan oo euros. Heshiiska Mohamed Salah ee Liverpool ayaa ah mid dhamaystiran oo ay ka hadhsan tahay in uu tijaabada caafimaadka maro oo si rasmi ah loogu dhawaaqo.
Dhinaca kale kooxda Liverpool ayaa doonaysa Liverpool ayaa kooxaha Arsenal, Tottenham iyo Juventus kula loolamaysa saxiixa xidiga kooxda Monaco ee Thomas Lemar waxayna dhamaan kooxahani doonayaan saxiixa Lemar oo xili ciyaareedkii dhamaaday wacdaro soo bandhigay sida uu sheegay wargayska Telefoot.
Sidoo kale Liverpool ayaa diyaar u ah in ay dalab 44 milyan oo gini ah u dirto kooxda Sportin Lisbon oo ay ka doonayso xidiga ree Portugal ee Gelson Martins kaas oo ay sidoo kale doonayso Manchester United halka Barcelona ay ka mid tahay kooxaha xiisaynaya waxaana warkan qoray wargayska ree Portugal ee A Bola.
Liverpool ayaa sidoo kale ku jirta loolanka Alex Oxlade-Chamberlain oo ay qayb ka yihiin kooxaha Chelsea iyo Manchester City waxayna Liverpool muddo ka mid ahayd kooxaha xiisaynayay saxiixa xidiga ree England ee Alex Oxlade-Chamberlain sida uu sheegay Sky Sports.
Ugu danbayn Liverpool ayaa taran xoogan kala kulmaysa kooxaha Chelsea iyo Juventus ee saxiixa xidiga kooxda Porto ee Ruben Neves kaas oo lagu qiimaynayo 40 milyan oo euros waxaana tartankan Chelsea iyo Liverpool kula soo biirtay Juventus sida uu wargayska Mirror qoray.